Massage Anya na -apịaji, oche ịhịa aka Salon Mma - Belove
onye ndu ngwaahịa ahụike nwere ọgụgụ isi.
Belove (Guangzhou) Intelligent Technology Co., Ltd. dị na mpaghara Zengcheng mara mma nke Guangzhou. Ọ bụ ụlọ ọrụ agbakwunyere nke ụlọ ọrụ na azụmaahịa. Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ na -ekpuchi mpaghara square mita 2100, na ụlọ ọrụ kwụụrụ onwe ya kpuchie mpaghara square mita 1530. Ọ bụ ngalaba ahụike mba na Kọmitii na -ahụ maka ezinaụlọ bụ ngalaba ahụike mbụ. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị ndị injinia na ndị ọrụ aka ọrụ na ihe nrịba ama nke mba 5. Ruo ogologo oge, ọ na -arụkọ ọrụ nke ọma na ọtụtụ mahadum ndị ama ama na China iji guzobe ọnọdụ azụmahịa ọhụrụ na ahụike nke ịntanetị yana ọrụ igwe ojii + nnukwu data, wee bụrụ onye ndu ngwaahịa ahụike nwere ọgụgụ isi.
Ebe a na -ere ngwaahịa
Factory Price Electric Smart Eye Massager Hot C ...
Ahụike eletrik nwere ọgụgụ isi okomoko efu efu ...
Full Body Spa ịhịa aka n'ahụ oche Smart Best ịhịa aka n'ahụ ...
Intelligent Voice Control Okomoko Music Capsule ...
Ụzọ 12 maka AI iji metụta ụlọ ọrụ ahụike
N'ime afọ a "ezumike oyi kacha ogologo na akụkọ ntolite", ndị enyi m niile mụtara n'onwe ha "klaasị mepere emepe ahụike". Klas a abụghị naanị mụrụ "ahụike igwe ojii", "mgbatị ahụ ụlọ" na isiokwu ndị ọzọ na -ekpo ọkụ, kamakwa ọ mere ka nlebara anya ndị mmadụ ka mma na ahụike ha. ...
A na -atụ anya na ọgụgụ isi mmadụ ga -abụ ike mgbanwe na ngalaba nlekọta ahụike. Yabụ kedu ka ndị dọkịta na ndị ọrịa si erite uru na mmetụta nke ngwaọrụ ndị AI na -akwagharị? Ụlọ ọrụ nlekọta ahụike nke oge a etozuola oke ma nwee ike mee nnukwu mgbanwe. Site n'ọrịa na -adịghị ala ala ...
gụpụta ozi igwe na akụrụngwa kacha ọhụrụ dị elu
Belove Hot ere ABS Microfiber Pu Akpụkpọ anụ Mu ...
Ikuku na -asacha eletriki ihu nkpuchi Smart Face Ele ...
Hepa Electric wearable Respiratoring na -eku ume ...
Mgbaji nke ọgụgụ isi Alexa, 2021 kacha mma nhicha robot, Sweep Robot Vacuum Cleaner, Robot Wet Na Akọrọ, Oche ịhịa aka n'ahụ Zero, Robot Office Kitchen Recharge na -akpaghị aka,